I-Adobe ibeka ezandleni zakho ezi zixhobo zintathu zamahala zeempawu zeXD | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Khuphela ezi Zixhobo ze-Icon ze-Adobe XD CC zasimahla ezenziwe ngaBayili beMbali
UManuel Ramirez | | Idizayini yeMifanekiso, Iimpawu
I-Adobe iye yaba inkampani ebaluleke kakhulu kuyilo enkosi kwiinkqubo zayo ezihambele phambili kunye ne-Cloud Cloud suite esinokuthi siqhubeke nokuzoba kunye nethebhulethi yethu yemizobo, hlela ividiyo ngePremier okanye imveliso yasemva kwexesha eneziPhumo zeAdobe. Imizekelo emithathu ecacileyo yezixhobo ezahlukeneyo ezilawulayo ukuthatha imveliso yethu iye kumanqanaba aphezulu kakhulu.
Ngeli xesha, ngenxa yokuzimasa kuka-Adobe kuhlelo lwase-Awwwards lwaseYurophu, umsitho wesalathiso kuyilo lwe-UX / UI, ityhile Intsebenziswano nabayili abathathu abadumileyo: U-Lance Wyman, u-Anton kunye no-Irene kunye no-Büro Destruct. Intsebenziswano esekwe ekudalweni kweekiti ezintathu ezizodwa zeAdobe XD.
Uthotho lweekithi eziza kube ziluncedo ngokuhambelana noyilo lwe icon yangoku kwaye ke ubase nakowuphi na wemisebenzi okanye kwiiprojekthi zexesha elizayo esiza kungena kuzo. Ezi icon zinokusiwa kwiLifu lokuDala "ilifu" ukuze zikwazi ukuzisebenzisa kuzo zonke iinkqubo esizifunayo.
Iikiti ezintathu ezifika ngaxeshanye njengophuculo olukhulu oluvumela Umdibaniso opheleleyo wokutsala kunye nokulahla iivenkile kwilayibrari yeCC kwindawo yokusebenza; nditsho notshintsho olusetyenzisiweyo luya kuvumelaniswa.
Zonke ezi zixhobo zintathu zenziwe nguLance Wyman, owaziwa ngobuchule bokubonakalayo kwendalo ebonakalayo; UAnton noIrene, duo ka Abayili be-UX nabathengi abanjengoGoogle, Wacom kunye neHTC; kunye neBüro Destruct, istudiyo esiphayona kunye nabathengi abanjengoSwatch, uPebble nabanye abaninzi.
Ukufumana iikiti ezintathu unako Khuphela uvavanyo lweentsuku ezi-7 zasimahla lwe-Adobe XD, ukufikelela kule khonkco ukuzikhuphela kwaye ucofe kwindawo nganye ukuze ubenazo kwikhompyuter yakho. Ngoku ungazicofa ukuba uye kwiakhawunti yeCloud Creative kwaye uzisebenzise ngendlela othanda ngayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Iimpawu » Khuphela ezi Zixhobo ze-Icon ze-Adobe XD CC zasimahla ezenziwe ngaBayili beMbali
Ukufota kwemiqolomba yomkhenkce waseIceland
Yenza umzekelo wesweatshirt uyilo lwakho olulungileyo